Mandalay Fm Weekend Show For (16.8.2015) Sunday | Mandalay FM Radio
Mandalay Fm Weekend Show For (16.8.2015) Sunday
ပျော်ရွှင်စရာ ''Special Weekend '' ဖြစ်ပါစေ FM ပရိတ်သတ်ကြီးရေ . . .Mandalay Fm Weekend Show ရဲ အစီအစဉ်ကောင်းများစွာက မိသားစုအစုံအလင် နားဆင်ဖို့ နေ့လည် 11:00 မှ ညနေ 4:00 အထိ (5) နာရီစာ ကဏ္ဍမျိုးစုံ နဲ့  ရှိနေမှာပါ
(11:00 to 1:00 )
စိတ်ဝင်စားစရာ လတ်တလောသတင်းများ . . အနုပညာရှင်များရဲ့  လက်ရှိ လှုပ်ရှားမှု များ နဲ့ အတူ လူငယ်ကြိုက် သီချင်းကောင်း များ ထုတ်လွှင့် တင်ဆက်မှု အစီစဉ် နှင့် ပျော်ရွှင်စရာ ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းလေးတွေဖြေဆိုရင်း သီချင်းလည်းတောင်း
ဖုန်းငွေဖြည့် ကတ်တွေလည်း လက်ဆောင်ရနိုင်မယ့် ပျော်စရာ အစီစဉ်တွေကရှိနေပါတယ်
ph; နံပါတ်က 01.501709
By Host . . . မင်းယု
(1:00 to 4:00 )
ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာက သားသားမီးမီး တို့အတွက် ပုံပြင်လက်ဆောင် ကဏ္ဍ . .ပရိတ်သတ် တွေ ပျော်ရွှင်စွာပါဝင်နိုင်မည့် သီချင်းတောင်းအစီအစဉ် နှင့် ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပါ အချိန်နဲ့  တစ်ပြေးညီ နားဆင်ရမှာပါ။
ဆက်ပြီး ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်တွေ လက်ဆောင်ရမယ့် အားကစားဥာဏ်စမ်းအဖြေညှိ အစီစဉ်တွေ က စောင့်ကြိုနေပါတယ်
ph; no; 01-501709
By Host . . . ထား